आज देखि नयाँ आईपीओ निष्कासन हुदै, कति दिन आबेदन ? |
Home शेयर बजार आज देखि नयाँ आईपीओ निष्कासन हुदै, कति दिन आबेदन ?
आज देखि नयाँ आईपीओ निष्कासन हुदै, कति दिन आबेदन ?
काठमाण्डौं– न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज असोज १५ गतेबाट २२ करोड ५० लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ ।
कम्पनीले १०० अंकित दरका कुल २२ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। कुल कित्तामध्ये २ प्रतिशतले हुन आउने ४५ हजार कित्ता कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने ५ प्रतिशतले हुन आउने १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ।
बाँकी २० लाख ९२ हजार ५०० कित्तामा सर्वसाधारणले आवेदन दिन पाउनेछन्। न्यादी हाइड्रोपावरको आईपीओमा सर्वसाधारणले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतममा ५० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ।
यो आईपीओको निष्कासन बन्द छिटोमा असोज १९ गते र ढिलोमा असोज ३१ गते बैंकिङ समयपछि हुनेछ।नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सि–आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थारु र तिनका शाखा कार्यालयका साथै मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सकिनेछ।
कम्पनीको यो आईपीओ बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ।कम्पनीले लमजुङ जिल्लामा ३० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रतिमेगावाट लागत अनुमान २० करोड ३९ लाख २५ हजार रहेको छ।
कुल लगानी अनुमान ६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रहेको छ। साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि ७.७३ वर्ष तथा डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि १३.८२ वर्ष रहेको छ।- आर्थिक संदेश
कार्तिक महिनाको पहिलो साता नै नयाँ आइपीओ निष्कासन हुँदै, कुनको र कति ?